World Archives - Page 35 of 37 - Puntland Mirror Believable Media Website
July 2, 2016 Abdi Omar Bile 0
Dowlada Bangladesh ayaa sheegtay in 20 qof lagu dilay weerar ay niman dablay ah ku qaadeen makhaayad caan ah oo kutaala caasimada Bangladesh, Dhaka. Nimanka hubaysan ayaa weerarka ku qaaday makhaayada Holey Artisan Bakery […]
Nin Yuhuud ah ayaa la dilay xaaskiisa iyo labo caruur ah oo uu dhalay ayaa la dhaawacay kadib markii gaarigooda rasaas lagu qabadsiiyay Daanta Galbeed, sida ay sheegeen militariga. Ninka ayaa dhintay markii gaariga […]
Ugu yaraan 36 qof ayaa ku dhimatay 147 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraro isbiimayn ah oo ka dhacay garoonka diyaaradaha caalamiga (Ataturk) ee magaalada Istanbul dalka Turkiga, sida uu sheegay Raysulwasaaraha […]
June 28, 2016 Puntland Mirror 0
Dad badan ayaa ku dhaawacmay labo qarax oo isxiga oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ugu weyn ee magaalada Istanbul (Ataturk) ee dalka Turkiga, sida ay sheegtay wasaarada arrimaha gudaha Turkiga. Rasaasta qoryaha ayaa sidoo kale […]
June 27, 2016 Puntland Mirror 0
Raysulwasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu ayaa cadeeyay in Israel ay heshiis la gashay wadanka Turkiga si loo soo cesho xiriirka, wuxuu intaas ku daray in heshiiska uu kaalin weyn ka qaadan doono hagaajinta dhaqaalaha dalkiisa. […]
June 26, 2016 Abdi Omar Bile 0
Ciidamada dowlada Ciraaq ayaa sheegay in ay qabsadeen meeshii ugu dambaysay oo ay ku xooganaayen maleeshiyada Dowlada Islaamika ah (ISIS) ee magaalada Faluuja. Madaxa la dagaalanka howlgalka argagixisada Janaraal Cabdulwaaxid al-Saadi ayaa sheegay […]
London-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha UK ayaa xilka ka dagaya bisha Oktoobar kadib markii UK ay u codaysay in ay ka baxaan Midowga Yurub. Isaga oo ka hadlayay banaanka aqalka UK looga taliyo ee 10 Downing […]
London-(Puntland Mirror) Dadka boqortooyada Midowday (UK) ayaa ayaa u codeeyay in ay ka baxaan Midowga Yurub kadib afti dadweyne oo taariikhi ah oo dalkaas ka dhacday. Gudaha dalka Ingiriiska gobolka walba oo ka baxsan caasimada […]
June 23, 2016 Puntland Mirror 0
Doorashada afti ka qaadida dad weynaha Boqortooyada Midowday (Britain) ayaa bilaabmatay saakay oo Khamiis ah halkii saac ee subaxnimo ee saacada Britain, waxaana dad weynaha ay u codaynayaan in Britain ay ka baxdo Midowga Yurub […]
June 22, 2016 Puntland Mirror 0
Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Koonko, Jean-Pierre Bemba ayaa lagu xukumay 18-sanno oo xabsi ah, waxaa xukunka ku riday Maxkamada Dambiyada Caalamiga ah ee (ICC) oo dhagaysanaysay dambiyo dil iyo kufsi ah oo dhacay sanadkii […]